धान तथा चामलको बढ्दो आयात | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण धान तथा चामलको बढ्दो आयात
लेख | दृष्टिकोण 134 views
धान तथा चामलको बढ्दो आयात
विगतमा चामल निर्यात गर्ने देश नेपालमा हाल वर्षेनि ठूलो धनराशी खर्च भएर धान तथा यसका उत्पादन खास गरी विभिन्न गुणस्तरको चामल आयात हुने गरेको छ ।
यस लेखमा विगत ५ वर्षमा नेपालमा कति मूल्य तथा परिमाणमा धान तथा चामलको आयात भयो विश्लेषण गर्न खोजिएको छ । हुन त यस्तो प्रवृत्ति विश्लेषण गर्न केही दशककै तथ्याङ्क हेर्नुपर्ने हुन्छ । तैपनि ५ वर्षको तथ्याङ्कले पनि महत्त्वपूर्ण सङ्केतहरू दिन सक्छ ।
धान तथा यसका उत्पादनअन्तर्गत यस लेखमा धान, नफलेको चामल (ब्राउन राइस), पालिस वा चम्किलो गरेको वा नगरेको, कुटेर तयार गरेको चामललाई लिइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ४ लाख ६४ हजार मेट्रिक टन चामल आयात भएको थियो, जसको मूल्य करीब १७ अर्बबराबरको थियो । सो वर्ष भारतबाट मात्र करीब २ लाख २८ हजार मेट्रिकटन चामल ८ अर्ब १८ करोड मूल्यमा आयात भएको थियो । २०७०/७१ मा चामलको आयात घटेको देखिन्छ (२ लाख ८९ हजार मेट्रिक टन, मूल्य करीब रू. ११ अर्ब ७९) । तर, २०७१/७२ मा यो बढेर ३ लाख ५१ हजार मेट्रिक टन आयात (करीब रू. १५ अर्ब) पुगेको थियो । उक्त आर्थिक वर्षहरूमा प्रायजसो चामल भारतबाट आयात भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा आयात पुनः वृद्धि (११ प्रतिशतले) भएको थियो (करीब ३ लाख ९१ हजार मेट्रिक टन, करीब रू.१८ अर्ब ७६ करोड) । आयात मूल्य भने २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा भारतबाट ३ लाख ८६ हजार मेट्रिक चामल आयात भएको थियो जसको आयात मूल्य रू. १८ अर्ब ५२ करोड थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा आयात झण्डै उस्तै (३ लाख ९४ हजार मेट्रिक टन, करीब रू.१८ अर्ब ७६ करोड) थियो । उक्त वर्ष भारतबाट मात्र ३ लाख ८६ हजार मेट्रिक टन करीब रू.१८ अर्ब ७६ करोडमा आयात भएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को प्रथम ६ महीनामा चामलको आयात २ लाख ६१ हजार मेट्रिक टन भएको र सोको आयात मूल्य रू. ११ अर्ब ११ करोड रहेको देखिन्छ । यो परिमाणमा ३३ प्रतिशत र मूल्यमा २० प्रतिशत वृद्धि हो । गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को प्रथम ६ महीनाको अवधिमा करीब १ लाख ९५ हजार मेट्रिक टन चामल आयात भएको र आयात मूल्य करीब रू. ९ अर्ब २९ करोड थियो ।
विगत ५ वर्षको अवधिमा केकति परिमाणमा चामल आयात भएको छ, आयातमा केकस्तो उतार चढाव आएको छ, तथ्याङ्कीय विवरणसहित ग्राफमा प्रस्तुत छ ।
आयात हुने स्रोत देशमा त्यति विविधता छैन । सबैजसो आयात भारतबाट नै भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा भने भारतबाहेकका मुलुकबाट उल्लेख्य मात्रामा आयात भएको देखिन्छ । २०७२/०७३ र २०७३/७४ मा अन्य मुलुकबाट थोरै मात्रामा आयात भएको देखिन्छ भने विगत ५ वर्षका बाँकी आर्थिक वर्षहरूमा भारतबाहेकका मुलुकबाट चामल आयात भएको देखिँदैन ।
आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ४ लाख ७८ हजार मेट्रिक टन धान आयात भएको थियो, जसको मूल्य करीब ९ अर्बबराबरको थियो । उक्त वर्ष भारतबाट ३ लाख ३८ हजार मेट्रिक टन (करीब ४ अर्ब ७० करोडबराबरको) आयात भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा धानको आयात घटेको (१ लाख ६५ हजार मेट्रिक टन) र मूल्य करीब रू. ४ अर्ब ४८ करोडको थियो । यस वर्ष सबैजसो धान भारतबाट आयात भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा ३ लाख ४६ हजार मेट्रिक टन (करीब रू ९ अर्ब बराबरको) आयात भए पनि २०७२/७३ मा आयात घटेको ( करीब ९४ हजार मेट्रिक टन, मूल्य २ अर्ब ४९ करोड) थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा आयात वृद्धि भई १ लाख ६३ हजार मेट्रिक टन (मूल्य करीब रू. ४ अर्ब २९ करोड) पुगेको थियो । २०७०/७१ र त्यसपछिका वर्षहरूमा आयात भएको सबैजसो धान भारतबाट आयात भएको देखिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को प्रथम ६ महीनामा धानको आयात ९२ हजार ६ सय मेट्रिक टन (मूल्य रू. २ अर्ब ३० करोड) रहेको देखिन्छ । यो परिमाणमा झण्डै ३१ प्रतिशत र मूल्यमा करीब ३३ प्रतिशत वृद्धि हो । गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को प्रथम ६ महिनाको अवधिमा करीब ७१ हजार मेट्रिक टन धान आयात भएको र आयात मूल्य करीब रू. १ अर्ब ७३ करोड रहेको देखिन्छ ।
राम्रो नफलेको चामल (ब्राउन राइस)
आव २०६९/७० मा १ हजार ५ सय ८३ मेट्रिक टन ब्राउन चामल आयात भएको थियो, जसको मूल्य करीब १० करोडबराबर थियो । २०७०/७१ मा भने घटेर ४ सय ५४ मेट्रिक टन (मूल्य रू. २ करोड ८६ लाख) थियो । २०७१/७२ मा १ हजार २ सय ५४ मेट्रिक टन (मूल्य रू ७ करोड १७ लाख) आयात भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा आयात एक्कासि बढेको देखिन्छ । उक्त आर्थिक वर्षमा करीब ९ हजार २ सय ८७ मेट्रिक टन (मूल्य ४१ करोड ८० लाख) आयात भएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा आयात पुनः घटेर २ सय ८८ मेट्रिक टनमा ओर्लेको छ, जसको आयात मूल्य १ करोड ३५ लाख थियो ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को प्रथम ६ महीनामा ब्राउन चामलको आयात २ सय १५ मेट्रिक टन भएको र सोको आयात मूल्य रू. १ करोड ६४ लाख रहेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को प्रथम ६ महीनाको समीक्षा अवधिमा ७१ मेट्रिक टन आयात भएको र आयात मूल्य करीब रू. ३२ लाख रहेको देखिन्छ । गतवर्षको समीक्षा अवधिभन्दा यस वर्षको सोही अवधिमा झण्डै २०० प्रतिशतले यस्तो चामलको परिमाणमा वृद्धि भएको र आयात मूल्य करीब ४०० प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ ।
धान तथा चामलको वर्षेनि ठूलो परिमाणमा आयात भइरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । पैठारीलाई विस्थापित गर्न खेतीयोग्य जमीन पनि नभएको होइन । तर, उब्जाउ र सम्म जमीनमा मानिसको बसोवास बढ्दै गएको छ । काम गर्ने उमेरसमूहका लाखौं युवा विदेशमा पसिना बगाइरहेका छन् । या त बूढाबूढी या केटाकेटी या जवान भए पनि महिलाको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा बढ्दै गएको छ । काम नगरी बस्ने बानी बढिरहेको छ । खेतीबालीको उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन । काम गरेर खानेको सामाजिक प्रतिष्ठा राम्रो मानिँदैन । यी नै धान चामलको वर्षेनि आयात बढ्नुका प्रमुख कारक तत्त्व हुन सक्छन् । यसको सुधारका लागि पहलकदमी लिनु उपयुक्त हुनेछ ।